Sivavanye iimfama ezikrelekrele nezenzekelayo ze-KADRILJ ezivela kwi-IKEA. | Iindaba zeGajethi
I-KADRILJ sihlalutya i-IKEA smart blind
Iimveliso "ezikrelekrele" Ziya ngokuya zikhona kule mihla yethu nakumakhaya ethu, abo bacebisa ukubonelela ngezindlu zabo ngoku, bafumene IKEA umlingane olungileyo xa kufikwa ekubandakanyeni iimveliso ezinonxibelelwano ezinje ngeebhalbhu zokukhanya, izithethi kwaye ngoku nazo ziyimfama. Ewe siyazi ukuba iimfama ezizenzekelayo bezisoloko zikho kwimarike ixesha elide kodwa… ukhona umntu owenze kwalula njenge-IKEA?
Hlala nathi kwaye ufumanise ukuba yeyiphi imodeli ye-IKEA KADRILJ kwaye kutheni ibekwe njengeyona mfama inomdla kwezentengiso. Imfama esinokuyilawula ngeKhaya likaGoogle kunye nolawulo lwayo olukude.
Siyazi ukuba into yokuba ndikuxelele apha okanye uyibona ngqo ayifani, Kungenxa yoko le nto silayishe ividiyo yofakelo ngqo kwiYouTube Kwaye siza kukuxelela malunga nendlela esinokuyilawula ngayo kunye neyona nto inomdla, ungaphoswa yiyo, kuba ukuba uyithengile okanye uceba ukuyithenga, oku kuya kuyenzela lula.
1 Uyilo: Ubuncinci kakhulu, kakhulu IKEA
2 Inkqubo yofakelo
3 Isebenza njani imfama yeKADRILJ
Uyilo: Ubuncinci kakhulu, kakhulu IKEA
Ngokukhawuleza, le KADRILJ ivusa abanye kuluhlu lwe-IKEA lweemfama, Ingubo eguqulwayo engwevu kunye neplastiki kunye nealuminium zigqityiwe ngemibala yendalo. Ngapha koko, iphantse yafana nakwabanye esele ikho, kungekuphela kufakelo, kodwa kubungakanani kunye neemilo. Malunga nento kuphela eyahlukileyo kukuba, ngenxa yezizathu ezicacileyo, umphezulu uyatyeba kancinane. Inesembozo kwikona ephezulu ngasekhohlo eya kusivumela ukuba sifake kwaye sisuse ibhetri xa kufuneka siyibize. Ndamangaliswa kukuba bengasinikanga amandla okutshaja ibhetri ngaphandle kokuyibiza.
Into esinayo ecaleni kwesi sigubungelo ngamaqhosha amabini amancinci ngokungabonakaliyo, kwaye oko kuyakusikhupha ngaphandle kwengxaki enye, kwaye kukuba basivumele ukuba siphakamise kwaye sinciphise iimfama ngaphandle kwesidingo seremote, ucinga ukuba ulahlekelwe? Ewe, ngelixa ucela entsha, unokukhuphela kwaye ukhuphele ngaphandle kokusebenzisa usetyenziso. Ilaphu lakhiwe nge-83% ye-polyester kunye ne-17% yenylon, Ngelixa ezinye izinto zenziwe ngeplastikhi kunye nealuminium, uyilo lincinci, luqheleke kakhulu kwiKEA.
Iintaba ze-IKEA nokuba uyazithanda, okanye uzithiyile. Ndingomnye wabantu abanqabileyo abonwabileyo ngokwenza olu hlobo lwezinto. Ukuyifaka, kuya kufuneka kuphela amanqaku amabini e-ankile kunye neehuku ezibandakanya oko. Ziyizikhonkwane ezikhutshwayo kunye nenkqubo yeqhosha, kulula ukuyibeka njengokuba ususe. Nje ukuba sithathe imilinganiselo ehambelanayo, kufuneka sibambelele iihaksi ezinezikhonkwane ezine (ezimbini kwisitshixo ngasinye). Ewe, khumbula ukuba izikrufu azifakwanga kwiphakeji, ngenxa yesizathu esithile andazi. Y Nangona imfama ingekho nzima kakhulu, ayikaze ibenzakalise ukusebenzisa izikere ezilungileyo zityebile noko.
Beka amagwegwe Sifanele ukucinezela kuphela iqhosha elihambayo elivumela ukuba lingene kwaye likhutshwe kuphela nje xa sibeka imfama. Sinezinto zonke esele zilungile. Into ekufuneka siyenzile kukuvula isiciko kwaye ufake ibhetri, ehlala inentlawulo ethile. Ngesembozo ngaphakathi siza kuthatha isixhobo soqhagamshelo kwaye siyifakele, ngelixa i-RF emitter iqhagamshelwe nge-USB kwesi sixhobo sokuqala. Ine-USB Imazi enokusetyenziselwa ukutshaja ibhetri yemveliso, okanye nasiphi na esinye isixhobo, eli linqaku elixhasa iadaptha yenethiwekhi.
Isebenza njani imfama yeKADRILJ
Sineendlela ezintathu zokulawula i-KADRILJ eyimfama evela kwi-IKEA ngokukhawuleza nangokulula:
Ngaphesheya kwebhulorho ye-TRADFRI ngeapps ezihambelanayo, iKhaya likaGoogle
Ngu Ulawulo LWERIMOTHI ifakiwe kwiphakheji
Ngokusebenzisa amaqhosha amabini abekwe ecaleni kwesivalo ibhetri kwimfama
Sele ndikulumkisile, eyona ndlela ixhaphakileyo oza kuyisebenzisa ngayo imfama, ngaphaya kwe-automation eveliswe yi-IKEA Smart Home, kukulawula okukude. Oku kunenkxaso yemagneti esinokuthi sibambelele eludongeni nge-3M yakho yokuncamathela okanye ngezikrufu ezimbini. Singaluthatha olu lawulo lukude kwaye sihambe nalo naphina apho sifuna khona. Incinci, yakhiwe kakuhle kwaye isebenza imigama emide, Akunyanzelekanga ukuba isondele kakhulu kwiimfama, ndiyithandile.
Sijonge inyathelo elilandelayo kwi-automation kunye ne-automation yasekhaya. Ndihlala ndicebisa ukuqala ngeebhalbhu zokuqala, apho iPhilips kunye noluhlu lwayo lweHue kunye ne-IKEA noluhlu lwayo lweTRADFRI zibekwe ngokucacileyo njengeenkokheli. Kodwa xa ufuna enye into, kuya kufuneka uzenzele iimfama kunye namakhethini. Uncedo lokuqala kukuba kulula kangakanani ukuyifumana, kuyo nayiphi na i-IKEA onayo. Saya kufakelo, kwaye kubonakala ngathi i-IKEA ibeke umzamo omkhulu koku, kwimizuzu engaphantsi kwe-15 sinako ukusebenza ngokungaboni kakuhle, kwaye oku kuyancomeka.
Uyilo oluncinci kunye nofakelo olulula
Inendawo yayo ekude kwaye ayisindi
Ayizuzi ubukhulu okanye ubungakanani xa kuthelekiswa nomgangatho
Okwangoku iyahambelana neKhaya likaGoogle kuphela
Ayibandakanyi izikrufu okanye iiplagi zokufaka
Inokuba opaque ngakumbi (kukho enye imodeli eyiyo)
Isinyathelo esilandelayo kukuba ne-TRADFRI yokuxhuma ibhuloho kwaye uqhubeke ukuyifaka ngokukhawuleza. Xa sele unayo, Ndiyakuqinisekisa, ngekhe wazi ukuba ungaphila kanjani ngaphandle kwayo. Indawo ekude isebenza ngokumangalisayo kwaye iba lihlakani elifanelekileyo xa singafuni "ukulahla" iKhaya likaGoogle. Siza kuba nakho ukuthenga le KADRILJ kwi-IKEA ngamaxabiso azakubakho phakathi kwama-99 euros kunye nee-euro ezili-129 malunga kuxhomekeke kubungakanani esibukhethayo, ke iindleko ngokucacileyo ziphantsi kunoko ezinye iimveliso zinikezela ngeemfama ezilumkileyo.
Sivavanye iimfama ezikrelekrele nezenzekelayo ze-KADRILJ ezivela kwi-IKEA.
Njengengongoma engalunganga ndifuna ukuqaqambisa inyani yokuba ayikahambelani neApple KomeKit, ayisiyiyo imeko kunye nezinye iimveliso ze-IKEA ezifanelekileyo. Nangona kunjalo, inkampani yaseSweden ithembisile ngohlaziyo lwexesha elizayo apho siya kuba nakho ukuyisebenzisa ngeKhaya likaGoogle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » I-KADRILJ sihlalutya i-IKEA smart blind
Eyona nto ibalaseleyo ngeCyber ​​Monday 2019 kwiAmazon
Olona luhlu lubalaseleyo lwangoLwesihlanu oMnyama ku-Amazon